Uma baahnid in aad tagtid mid ka mid ah xafiisyadeenna. Maalinta ugu horreysa ee shaqo la'aantaada aqoonsi elekteroonig ah iskula qor barta intarneetka ee xafiiska shaqada. Ballan wax isla qorsheyn ah la dhigo xiriiriyaha shaqada, a-kaasana toos u dalbo.
Waa muhim inaad Xafiiska Shaqada iska diiwaan geliso maalinta ugu horeeyso oo aad shaqo laawe noqoto. . Xaaladdaas maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha wuxuu helayaa fursad u ku qiimeeyo haddii laga bilaabo maalinta ugu horeesyo aad xaq ku leedahay gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha iyo in kale.
Markii maalinta ugu horeeyso ee aad shaqo laawe tahay, aad iska diiwaan geliso Xafiiska Shaqada, oona hab firfircoon shaqo u raadsnaayso, waxaa suuraggal noqon karto in hay`ad kale, ama maamulka Dowladda hoose kale u qiimeeyo xaq u yeelashada qaadashada gunnada. Maamulka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] wuxuu tusaale go`aan ka gaari karaa dakhliga ku salaysan gunnada jirrada [sjukpenningpenninggrundande inkomst, SIG].
Haddii aanad wax koonto ah ku lahayn arbetsformedlingen.se waa khasab inaad marka hore buuxiso macluumaadkaaga oo samaysato koonto.
Marka aad samaysato koonto ee aad ku gasho aqoonsigaaga elaktarooniga ah ayaad bilaabi kartaa diiwaan-gelintaada shaqo raadiye ahaan.
Waxaad ugu dambeyn ballansanaysaa wakhtiga kulankaaga ugu horeeya ee aad nala yeelanayso.
soo qaado shahaaddooyinkaaga iyo caddaymahaaga
Sidee ayaan u baajin karaa ama u badali karaa kulan aan idinka idinla leeyahay?
Adigu waxaad ku baajinaysaa ama ku badalaysaa kulankaad la leedahay Xafiiska Shaqada adigoo nagala soo xiriira telafoonka ama xiriirka qoraalka. Adigu waxaad xitaa booqan kartaa xafiis ama goobta kulanka macaamiisha.
Ka fikir inaad nala soo xiriirto wakhti fiican ka hor kulankan!
Haa. Laakin waa inaad na booqata maalinta ugu horeeyso ee aad shaqo la`aanta tahay haddii kale gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassan] laguma siin doono.
Sidee ayaan qasnada shaqo la’aanta ugu wargelin karaa shaqo la’aantayda?
Marka aad iska diiwaan-gelinayso bogayaga intarnatka adigoo isticmaalaya aqoonsiga elaktarooniga ah ayaad isla markaa ku sheegaysaa inaad ka fikirayso inaad codsato qasnada shaqo la’aanta. Ka dib booqo bogga intarnatka ee qasnada shaqo la’aanta si aad u buuxiso macluumaadka ay iyagu u baahanyihiin.
Haddii aad horeyba uga qornayd ugana diiwaan-gashanayd qasnada shaqo la’aanta laakiin hakad aad ku jirtay iyadoo ay sabab u ahayd shaqo ama aad xanuusanaysay wakhti waxaad u baahantahay inaad nagala soo xiriirto telafoonka ama xiriirka qoraalka. Markaasi anaga ayaa wargelinayna qasnadaada shaqo la’aanta inaad mar kale noqotay shaqo raadiye. Adigu waxaad xitaa booqan kartaa xafiis ama goobta kulanka macaamiisha.
Haddii markii aad is-diiwaan gelinaysay aadan na wargelin inaad gunnad ka codsan doonto Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha (a-kassa), khadka taleefanka nagala soo xiriir kaddib anaga ayaa Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha aad ka tirsan tahay wargelin doono. Haddiise aad is-diiwaan gelisay markii aad na booqanaysay, waa inaad mar labaad na soo booqata arrintaan darteeda. Wargelinta Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha waxay hirgalaysaa taariikhda aan khadka taleefanka nagala soo xiriirto ama na booqato, oona aqoonsigaaga caddeyso.